Wararka Maanta: Talaado, Sept 15, 2020-Shiikh Nuur Baaruud oo farriin u diray wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka
Wuxuu si weyn u ammaanay kaalintii xildhibaannadu ay ku diideen arrinkaas, Waxa uuna intaas ku daray iney qaadeen tallaabo wanaagsan oo wax-tar u leh umadda Soomaaliyeed iyo diinta Islaamkaba.
"Waxaan leeyahay xildhibaannada waxaad gudateen waajibkii diiniga ahaa iyo kii dalkiinna idinka saarnaa" ayuu yiri Shiikh Nuur Baaruud.
Dhinaca kale, waxa uu farriin u diray wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda Soomaaliya, isagoo ugu baaqay in sharcigaas aysan mar kale soo celin.
"Waxaan ognahay cidda sharcigaan gadaal ka taagan, waa qolyaha beesha caalamka, waxaan leennahay isku dhaqan iyo diin maahin, waad aragtaan fool-xumada ka taagan dalalkiina" ayuu mar kale hadalkiisa ku daray.
Sharcigaan oo ay soo gudbisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa waxaa aad uga hor yimid badi xildhibaannada Baarlamanka Soomaaliya.